Dutchtown၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO တွင်ဒတ်ခ်ျအမြတ်အစွန်း• DutchtownSTL.org
Dutchtown နေရာများ: အကျိုးအမြတ်မဟုတ်
ခြာရိုကီလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ခြာရိုကီလမ်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အနုပညာ၊ သူတို့၏အစီအစဉ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသည်ခြာရိုကီလမ်းနှင့်တောင်စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးတွင်ရပ်ရွာအားပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်အားထုတ်မှုများ၌အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖိတ်ကြားခြင်း၊
ခြာရိုကီလမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
4019 အက်စ်က Grand Blvd.
Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း ရပ်ရွာလူထု၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု၊
314-352-4865 • ဒိန်းမတ်
Dutchtown South Community ကော်ပိုရေးရှင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
Franciscan ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်နေသောမိသားစုများအားအရေးပေါ်အကူအညီများပေးသည်။
ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း စိန့်လူးဝစ်areaရိယာရှိဂျာမန်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအနက်အကြီးဆုံးနှင့်အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျက်ဖာဆန်ရိပ်သာလမ်းနှင့်ဂျက်ဖာဆန်ကောင်တီရှိ Donau ပန်းခြံအဆောက်အအုံတွင်အဆောက်အ ဦး နှင့်ခန်းမနှင့်ပြင်ပအဖြစ်အပျက်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော၊ နိုင်ငံရေးမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာပညာရေးနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလှုပ်ရှားမှုများအားမြှင့်တင်ရန်၊ ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဘာသာစကားကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်နှင့်ဂျာမန်ဂီတ၊ ရိုးရာဝတ်စုံ။
314-771-8368 • ဂျာမန်
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စိန့်လူးဝစ် ReStore များအတွက် Habitat အသစ်များနှင့်ညင်ညင်သာသာအသုံးပြုသောအိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးဗီဒိုများနှင့်ကောင်တာများ၊ သစ်၊ တံခါးများ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ အလင်းရောင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ HVAC, ပရိဘောဂနှင့်ပုံစံမျိုး။
3830 အက်စ်က Grand Blvd.
Habitat for Humanity ReStore အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်
စိန့်လူးဝစ်လူသားများအတွက် Habitat လူတိုင်းတွင်နေထိုင်ရန်လျောက်ပတ်သောနေရာရှိသည့်ကမ္ဘာကိုယုံကြည်သည်။ Habitat သည်ဒေသန္တရအဆင့်နိမ့်အိမ်ရာများအားဖယ်ရှားပစ်ရန်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိသောဒေသခံမိသားစုများအနေဖြင့်မိမိတို့၏နေအိမ်များဆောက်လုပ်ရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်မိမိတို့၏အချိန်ကိုမြှုပ်နှံမည့်ပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ဖြင့်ထိုရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
လူသားများအတွက်စိန့်လူးဝစ္စ Habitat အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်
အနုပညာစင်တာကိုဖြတ် တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Intersect သည်လူငယ်များ၊ လူကြီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ အသင်းတော်များ၊ ပညာရှင်များနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အနုပညာနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းကိုချိတ်ဆက်ရန်၊
Intersect Arts Centre အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ (စအဖြစ်လူသိများ NICSTL) နေရာဒေသအခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အမြတ်အစွန်းမယူသောလူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ၅၀၁ (ဂ) (၃) သည်။
Neighborhood Innovation Centre အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ အကျိုးအမြတ်မဟုတ်